Ebe egwuregwu kacha mma na Andorra na Spain | Njem zuru oke
Njem zuru oke | | Andorra
Mgbe ngwụsị nke oge ọkọchị gasịrị, ọ bụ oge iji chee echiche banyere njem anyị ọzọ. Yabụ, n'etiti ụdị dịgasị iche iche nke ohere dịnụ bụ nhọrọ nke were ụbọchị ole na ole na-ekpori ndụ na snow na ọdụ dị iche iche na Andorra ma ọ bụ Spain.
Ebe ọ bụ na ọ naghị adị mfe mgbe niile ịkọ site n'otu ọdụ, n'okpuru, ị ga-enwe ike ịma ụfọdụ nkọwa nke ebe egwuregwu kacha mma na mpaghara ndị a.
1 Nna nna m
Ebe ezumike nke Grandvalira dị iche na ndị ọzọ site na ịbụ nke kasị ukwuu na Pyrenees niile. Ọ dị na Onye isi nke Andorra, ugbu a nwere ihe karịrị 200 kilomita nke mkpọda ugwu. Otu n'ime njirimara njirimara nke ọdụ a bụ ya iche iche na ugwu ugwu: egwuregwu nke mejupụtara ịgbada egwu na oge kachasị ogologo, na-achọpụta ụzọ kachasị agagharị. Nwere ike ịchọta ihe kacha mma Getaways na Andorra na Esquiades.com.
Trazọ egwu na Baqueira Beret
Baqueira Beret bụ, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, otu n'ime ndị kasị ama skai ntụrụndụ na Spain, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị a ma ama na-abịa ya, nke Eze Felipe nke Isii n'onwe ya pụtara ìhè. Stationlọ ọrụ a nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke egwu ahaziri ka emegharị maka ọkwa dị iche iche nke ndị ọbịa ya. Egwu ndị a gbaturu karịrị kilomita 155. N'ịbụ nke dị na ndagwurugwu Arán, na Pyrenees nke Catalan, na-eleta ya, ị nwere ike iji ya mee ihe iji nwee ọmarịcha ọdịdị ala na ọmarịcha gastronomy nke mpaghara ahụ.
Formigal ojii nwere 97 mkpọda ugwu nke ahụ ruru ngụkọta nke kilomita 157. Stationlọ ọrụ a nwekwara ebe ezumike abụọ, bọọdụ abụọ na bọọdụ snowboard. Ogige ahụ na-enyekwa ọrụ ndị ọzọ dịka ịgba ọsọ obodo ma ọ bụ ịnyịnya mmiri. Otu ihe dị iche iche nke Formigal bụ na ọ na-ekerịta ski ya na ọdụ Panticosa, yabụ na ị nwere ike ọ bụghị naanị ịgba ọsọ na ọdụ abụọ ahụ kamakwa ị ga-ezu ike na spa dị na nke ikpeazụ. Iglọ akwụkwọ dị na mpaghara Huesca.
Dabere na mpaghara Cerdaña, na Catalonia, ọdụ La Molina dị obere, mana ọ bụghị n'ihi nke ahụ dị obere. Na ngụkọta, ebe ezumike ahụ nwere mkpọda 54 nke gbakọtara kilomita 61 dị egwu. La Molina ojii na-mba mara maka ọ kwadoro a ọnụ ọgụgụ dị mma nke ihe omume mba ụwa niile nke ski. N'etiti ọrụ ya ọ ga-ekwe omume ịchọta ịnyịnya na ndị na-akpụzi snow, ọpụpụ na snowmobiles na sleds, n'etiti ndị ọzọ.
A na-ewukarị ebe a na-egwu mmiri na Sierra Nevada maka ịbụ otu n'ime ebe ntụrụndụ kacha mma na Spain. Na-adịbeghị anya, ọdụ nwekwara guzoro maka ya mmemme zuru ezu maka ụmụaka. N’ụzọ dị otu a, ọdọ mmiri nke Sierra Nevada nwere mkpọda ugwu a haziri maka omume nke obere ụlọ, yana ogige njem na-agụnye ebe nkiri dị ka igwe na-agba okirikiri na snowmobiles. En Esquiades.com Nwere ike ịchọta onyinye niile maka ọdụ Sierra Nevada na maka ọtụtụ ndị ọzọ dị na Spain, Andorra na France.
Cerler ọdụ bụ ọdụ kachasị elu na ọdụ Aragonese Pyrenees. N'ịbụ nke dị na ndagwurugwu Benasque, Cerler dị iche na ndị ọzọ n'ihi na ọmarịcha ala na ugwu dị elu gbara ya gburugburu. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ Cerler nwere nnukwu mkpọda ugwu enwere ike ịchọta mpaghara ahụ, site na mita 1.500 na 2.700. Ogige ahụ nwere kilomita 79 nke ugwu dị egwu, a haziri maka ogo mmụta dị iche iche nke ndị ọbịa.
Ogo nke snow bụ otu n'ime akụkụ kachasị mma nke ụlọ Boi-Taül. Emi odude ke ikpehe Lleida, ọdụ ahụ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke na-acha uhie uhie, yabụ ọtụtụ n'ime mgbagwoju anya bụ Ezubere maka ndị na-agba ọsọ nke ọkara na ọkwa dị elu, ọ bụghị maka ndị mmadụ ka malitere ịmalite ịkwọ ụgbọ. Ọdụ ahụ nwekwara ebe edebere maka snowpark, nke a maara dị ka "freeXperience". Ọzọkwa, ihe ọzọ dị mma nke ọdụ Boi-Taül bụ na ọ naghị adịkarị eju.
Stationlọ ọrụ a dị n'etiti obi Ndagwurugwu Aragon, ọkachasị na obodo Jaca. Ihe mgbagwoju a nwere otutu ndi ulo oru nri na kilomita iri ise nke ugwu ugwu. N'ihi ọnọdụ ya, ebe ezumike Astún na-agwakọta egwuregwu na njem na njem ntụrụndụ. N’ụzọ dị otu a, ụzọ mgbapụ nke Astún nwere ike ịgụnye ọtụtụ atụmatụ dị iche iche gafere ski..
Na Andorra, ebe ezumike nke Vallnord dị na ndagwurugwu Arcalís na La Massana. Ya karịrị 68 egwu ngụkọta 93 kilomita, full of a elu mma snow, na-ekwe nkwa site na mpaghara ebe ọdụ ụgbọ ahụ dị. Ogige ahụ nwekwara ogige ndị na-agba ịnyịnya ígwè maka ndị hụrụ ịnyịnya ígwè.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ebe egwuregwu kacha mma na Andorra na Spain
Ihe ị ga-ahụ na mba Basque: Site na egwuregwu nke n'ocheeze gaa na flysch a ma ama